Xildhibaan katirsan baarlamaanka Dowladda Federaalka Soomaaliya oo si culus ugu dhaawacmay qarax loogu xiray gaarigiisa gudaha Muqdisho - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaXildhibaan katirsan baarlamaanka Dowladda Federaalka Soomaaliya oo si culus ugu dhaawacmay qarax loogu xiray gaarigiisa gudaha Muqdisho
September 16, 2018 Puntland Mirror Somalia 0
Xildhibaan Maxamed Mursal Boorow. [Sawir Hore]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Xildhibaan katirsan baarlamaanka Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa ku dhaawacmay qarax ka dhacay Muqdisho, sida ay sheegeen laamaha ammaanka.
Qaraxa ayaa lagu xiray gaariga xildhibaan Maxamed Mursal Boorow xilli uu marayay gudaha Muqdisho fiidnimadii Sabtida.
Xildhibaanka ayaa dhaawac culus kasoo gaaray qaraxa, waxaana loo qaaday isbitaalka, sida ay wararku sheegeen.
Darawalkii gaariga xildhibaanka ayaa ku geeriyooday qaraxa oo ahaa mid balaaran oo laga maqlay inta badan xaafadaha Muqdisho.
Al-Shabaab ayaa sheegtay masuuliyada weerarkaas, sida ay sheegeen warbaahinta afkooda ku hadasha.
September 30, 2019 Maleeshiyada Al-Shabaab oo weerartay saldhiga Balidoogle
Ciidanka ammaanka Puntland oo Garoowe ku xiray xubno kamid ah koox isugu yeertay madasha samatabixinta Puntland
Garoowe-(Puntland Mirror) Ciidanka ammaanka Puntland ee ku sugan magaalada Garoowe ayaa maanta oo Jimce ah xiray xubno kamid ah koox isugu yeertay madasha samatabixinta Puntland, sida saraakiisha booliiska ay u xaqiijiyeen warsidaha Puntland Mirror. Xubnaha la xiray ayaa [...]
Madaxweyne ku-xigeenkii hore ee dalka Koonko, Jean-Pierre Bemba ayaa lagu xukumay 18-sanno oo xabsi ah, waxaa xukunka ku riday Maxkamada Dambiyada Caalamiga ah ee (ICC) oo dhagaysanaysay dambiyo dil iyo kufsi ah oo dhacay sanadkii [...]